यौन गम्भीरता - पुरस्कार पुरस्कार - प्रेम, सेक्स र इन्टरनेट
समाचार ब्लग यौन गला दबा
यौन दुखाइ बढ्दै छ। पुरस्कृत फाउन्डेशन विश्वास गर्दछ कि यो नि: शुल्क, स्ट्रिमिंग इन्टरनेट पोर्नोग्राफिको कारण उदीयमान सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटको हिस्सा हो। परोपकारी संस्थाका अध्यक्ष मेरी शार्पले बिहीबार on मा बीबीसी स्कटल्यान्ड टिभीको "द नाइन" मा हाम्रो कामको बारेमा छलफल गर्ने ठूलो अवसर पाएका थिए।th डिसेम्बर 2019।
छलफलको क्रममा उमेर प्रमाणीकरण कानून उठाइयो। मेरीले बीबीसी र मिडियामा फैलिएको गलत सूचनालाई सुधार्न सक्षम भएकी थिइन कि यसलाई खारेज गरिएको थियो। डिजिटल इकोनॉमी एक्ट २०१3को भाग the मा समावेश उमेर प्रमाणिकरण उपायहरूको कार्यान्वयन यस बर्ष लाग्न लागेको थियो। यो स्थगित गरिएको छ, परित्याग गरिएको छैन। टीआरएफले बेलायत सरकारका मन्त्रीले पठाएको चिठी देखेको छ जुन यस अडानको पुष्टि गर्दछ। यो योजना सामाजिक मिडिया साइटहरूमा समान उमेर प्रमाणीकरण उपायहरूको साथ व्यावसायिक पोर्नोग्राफी वेबसाइटहरूमा बच्चाहरूको लागि प्रतिबन्धित पहुँचलाई जोड्ने हो। अनलाइन हानि विधेयक हाल सोशल मीडिया साइटहरुमा मात्र केन्द्रित छ। व्यावसायिक वेबसाइटहरू र सोशल मिडिया प्लेटफर्महरू मार्फत अश्लीलताको पहुँच १ 2017 बर्ष भन्दा माथिका व्यक्तिहरूको लागि सीमित हुनेछ।
यौन गला दबाउने खण्ड द नाइनको पत्रकार फियोना स्टालकरले सोधेर शुरू गर्यो के यौनको समयमा अनावश्यक हिंसा "सामान्य" भइरहेको छ? यो धेरै प्रोफाईल आपराधिक घटनाहरूको परिणाम स्वरूप आउँदछ जुन 'रफ सेक्स गलत भएको गाउँ' को बचाव सुनेको छ। भर्खरको अनुसन्धानले देखाउँदछ कि बढ्दो संख्यामा युवती महिलाले पनि अनावश्यक हिंसाको अनुभव गरिरहेका छन्। के यो अश्‍लील सामग्रीलाई दोष दिन धेरै साधारण छ?
स्टूडियो होस्टहरू रेबेका कुरान र मार्टिन गिसलर त्यसोभए द रिवार्ड फाउन्डेशनको अध्यक्ष मेरी शार्पको साक्षात्कार भयो। पत्रकार जेनी कन्स्टेबलले पनि योगदान दिए। भिडियो दुई भागमा छ।
तपाईं टेलिभिजनमा हाम्रा सबै उपस्थितिहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ।